सारंगी रुदैछ.... :: Press Chautari ::
पुरै महिना दिन बित्यो बायाँ खुट्टा दुख्ने बिमारले थलिएको । थलिएको पनि के भनुँ ? त्यस्तै पर्दा बैशाखी टेकेर या निक्कै सास्तीले हिडेर नजिककैको पसल र अस्पताल ओहोर दोहोर गर्छु । उस्तै पर्दा कुनै नेपाली कार्यक्रममा झल्याक झुलुक पुग्छु । फाट्टाफुट्टा समाचारहरु सम्प्रेषण गर्छु । दुखाई बिर्सिएर लामै समय बिताईदिन्छु । जब साँझ पर्छ अनि खुट्टा बेतालले दुख्छ 'टन्टन्ती' ।
थाह छैन मेरो खुट्टा दुखेको हो या यो परदेश ? शरिरको दुखाईमा 'परदेश' चुक बनेर पोखिदो रैछ । भतभत्ती पोल्छ । सहनै पो सकिन्न रैछ यो परदेशको दुखाई र पीडा त गाँठे । यो चौडा छाती पट्पटी फुट्न खोज्छ । मुटु–कलेजो निचोरिन्छ । खुट्टाको दुखाईलाई मध्येरातमा पेन किलरले कति बेला अलि साम्मे पार्छ, म आनन्दले निदाउँछु । मानौं म आमाको काखैमा पल्टेर आकासको तारा हेर्दै कुम्भकर्ण झैँ सुतेको छु । उता मेरी आमा लोरी सुनाउँछिन् ।
बितेको अधिकांश समय सुतेरै गुजारे । साथीभाईको टेलिफोन र इमेलको जवाफ फर्काउन पनि सकिन । सत्य भनुँ ? टेलिफोन र अन्य सञ्जालमा दोहोरो कुरा गर्न पटक्कै मन पनि लागेन । केवल सहानुभूति राख्नु हुने सबैमा मनले साधुवाद दिएकोछु, बस् ।
नेपालको सुदूर पुर्वीपहाड सोलुखुम्बु जिल्लमा जन्मेर कोलम्बसले भस्मे फाँडेर बसाएको यो आजको शहरमा ओतिंदा पनि मेरा हिमाल, मेरा पहाड, मेरा बस्ती सप्पै-सप्पै आँखाबाट हटेनन् । यहि उज्यालो शहरबाट म त्यो बस्तीको केन्द्रमा बसेर कमेरो माटोको सुगन्ध सुँघी रहेछु । मलाई त लाग्छ, हामी सबैलाई यस्तै हुन्छ । जसले छातीमा देश बोकेर परदेश बाँचीरहेछ ।
“मरे पछि कुहिन्जेल सुत्नु”
कुनै बेला बरिष्ठ चलचित्र निर्देशक तुलसी घिमिरेले गुरुसँग एकछिन सुत्ने समय माग्दा यसो भनेका थिए रे–घिमिरे अंकल भन्नुहुन्थ्यो । यो वाक्यंश पल-प्रतिपल सम्झि बसे । र सम्झी बसे तुलसी घिमिरे र सबै परिवारलाई । तर म चाहि बाँचेरै खाली सुतेरै बसे । मनभरी देश ओछ्याएर बस्तीको धुन सम्झिदै गर्दा एकदिन फेसबुकको भित्तामा एउटा श्रव्य-दृश्य सामाग्रीमा टक्क आँखा रोकियो । दृश्यमा चार तन्नेरी सारंगी रेटेर गाउँदै थिए :
"सारंगी रुदैछ पारी गाउँमा
बाँसुरीले सुसेल्दैछ रानीबनैमा
पञ्चै बाजा नौमती राम्रो....."
(यो भिडियो पनि हेर्नुहोस् )
कुनै समय यो गीत मेरा गाउँबस्ती तिर खुब चल्तीको गीत थियो । खुब गाइयो यो गीत । जानेर-नजानेर, सुर-बेसुर, ताल-बेतालमा गाइयो । सायद उल्टो सुल्टो, तल माथि जसरी जानियो त्यसरी नै गाइयो । गाउनु चाहि गाइयो । ति तन्नेरी, तिनका सारंगी र गीतले मलाई त्यहि मेरो उद्गम बस्तीहरुमा पुगेको महसुस गरायो । कुनै बेला मैले नि त्यहि गीत गाएर लेक-अउल गरेको थिए, यसैगरी :
"किन बिस्र्यौ दौरासुरुवाल ढाका टोपी छैन
फरिया त भुल्यौ नि लै लै पटुकी नै छैन
चौबन्दी तुनामा बाजा बिनायो
मुर्चङ्गा मुखै कसले बजायो ।"
मसँग सारंगी त थिएन । रेडियो तिर कहिले काहि गन्धर्वले सारंगी बजाउँछन् सम्म भन्ने सुन्थे । ऊ बेला रेडियो नेपालमा स्वर्गिय पाण्डव सुनुवारले चौतारी भन्ने लोकगीतको कार्यक्रम चलाउँथे त्यत्ति बेला सारंगी बजाउने केहि गन्धर्व कलाकारहरुको नाम खुब सुने जस्तो लाग्छ । पछि काठमाण्डौं आएपछि मात्र त्यो सारंगीको रुप, रंग र आकार देख्न पाइयो ।
सारंगी नेपाली ठेट र मौलिक बाजा मध्येको शक्तिशाली बाजा जस्तो लाग्छ । चार वटा तारहरुमा हाम्रो देश बजेको सुन्छु म । तिनका तारबाट निस्केका धुनहरु सप्पै हाम्रै मात्र जस्तो लाग्छ । हाम्रै भाका गाए जस्तो लाग्छ । अझ सारंगी बजाउँदै हिड्ने गन्धर्वहरुले हाम्रो जीवन पो गाउँछन । हाम्रो सुख, हाम्रो दुःख लय हालेर भाका फेरी फेरी सारंगीमा रेट्छन जीवन जस्तै :
"भोजपुरको छेउमा बग्ने पिखुवा खोला
जहिले पनि दुःखै दुःख सुख त काँ होला ?
संगै जान्थ्यौं घाँस दाउरा, सँगै जान्थ्यौं बनैमा
अहिले सम्म सम्झना आउँछ, यो मेरो मनैमा"
मेरा दुखाईहरुमा यी माथिका गीतहरु मल्हम बने । यो कंक्रिडको शहरको एउटा सामान्य कोठामा उत्तानिएर यी गीत र धुनहरु सुन्दै गर्दा मैले कैयौं पल्ट म मेरो उर्जाशील बस्ती पुगे । जहाँ सारंगीले नरेटेका कैयौं चोटिला कथाहरु छन् । सारंगीमा नगाईएका धेरै लोकिला धुनहरु छन् । मैले नलेखेका अक्षरहरु त गरा गरामा छन् । कान्ला कान्लामा छन् ।
NOTE: (समय सन्दर्भ मेरो आफ्नो ब्लग पेज भएको सहर्ष जानकारी गरौद्छु )
विहिवार, २०७० माघ १५ गते ०८:०२ / Thursday, Jan 30, 2014 8:02 am
Sarbadhan Rai, uk
Dear Press chautari EditorFirst of all I would like to thank to Presschautari and wish and succeed in future. I am reguler press reader and listener.Thank you prasana